Ungayilungisa kanjani i-Epiphany kuFedora: i-GSettings, i-Flash nezandiso | Kusuka kuLinux
Ungayilungisa kanjani i-Epiphany kuFedora: i-GSettings, i-Flash nezandiso
Funda amanye amaqhinga ukulungisa lesi siphequluli esihle kakhulu futhi uthuthukise ulwazi lwakho lomsebenzisi, oluzokusiza ukuthi uzijwayeze nethuluzi le-GSettings.
Ngicabanga ukuthi esimweni ngasinye kungahluka, kepha kwesami, njengoba ngithole Epiphany (isiphequluli esisemthethweni se- I-GNOME), Sengiqala ukulahla iFirefox yami engiyithandayo.
Ngiyazi ukuthi iningi lenu laliyeka kudala Chromium/i-Google Chrome, kepha bengifuna enye indlela engayidlanga yonke i-RAM yami futhi yatholwa ezindaweni zokugcina ezisemthethweni zeFedora, futhi Akunjalo.
Ngemuva kokuzama i-Epiphany ngijabule ngokusetshenziswa kwayo kwememori ephansi (kimi phakathi kwezikhathi ezi-2 nezingu-6 ngaphansi kweFirefox 7), kepha iqiniso ukuthi ayisebenziseki ekuqaleni, ngakho-ke ake sifunde ukuyilungisa
Kulokhu sizosebenzisa Fedora 15 64-bit.
2 Ukufaka i-Flash
3 Kusetshenziswa izandiso
I-Epiphany (okungenani inguqulo 3) isebenzisa Ama-GSettings ukulondoloza izilungiselelo zakho. Ungqimba lokukhishwa lwale nhloso, olusetshenziswa ku-GNU / Linux kusistimu dconf njengendawo yokugcina impahla esezingeni eliphansi.
Singasebenzisa isihleli se-dconf sokuqhafaza. Sizothola okhiye be-Epiphany kuhlelo org.gnome.Epiphany. Ukuyifaka ku-Fedora:
I-sudo yum ifaka i-dconf-editor
Kulabo abafuna ukusebenzisa ithuluzi ngomugqa womyalo, ungabheka usizo ngemiyalo ejwayelekile:
Isibonelo, ukubheka zonke izinkinobho ze-Epiphany esizosebenzisa:
uhlu lwe-gsettings-luphindaphindiwe org.gnome.Epiphany
Manje sizobona ukuthi singazisebenzisa kanjani ezinye izici ezibonakala zisebenza impela:
gsettings setha i-org.gnome.Epiphany ngokuchofoza okuphakathi-kuvula-url kuyiqiniso
gsettings setha i-org.gnome.Epiphany new-windows-in-tabs true
i-gsettings setha i-org.gnome.Epiphany.web vumela ama-popups amanga
gsettings setha i-org.gnome.Epiphany.web min-font-size 10
Ngicabanga ukuthi bayazichaza kahle ...
Sesinayo i-Flash 11 esinayo, ngosizo lwendabuko lwe-64-bit GNU / Linux. I-Flash ubuchwepheshe bokuthengisa engingabuthandi kakhulu, kepha ngeshwa namuhla kuyadingeka ukujabulela iwebhu.
Bengisebenzisa Ukuququda Sekucacile kimi isikhashana ukuthi akakakhuli ngokwanele ukufaka esikhundleni seFlash. Okungenani i-FSF ibonile, futhi inayo njenge iphrojekthi ye-software ebaluleke kakhulu.
Ukuyifaka kuFedora sinendawo yokugcina esemthethweni ye-Adobe. Sifaka leli khosombe ngokuya ku- ikhasi lokufaka i-flash bese uyilayisha ngenketho I-YUM yeLinux.
Ngalokhu silanda iphakethe le-RPM elifaka i-Flash repository. Kuzofanele sifake iphakethe elishiwoyo bese i-plugin:
Isudo yum localinstall ~ / Downloads / adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
I-sudo yum ukufaka i-flash-plugin
Vele, singasebenzisa futhi amathuluzi wokuqhafaza ...
Noma kunjalo, lokhu kufaka iFlash kuFirefox nakwabanye, kepha hhayi i-Epiphany. Ukuyisebenzisa, sizomane senze i-symlink ku-plugin kusiqondisi se-Epiphany:
Enye yezinto eziphambili zeFirefox umtapo wolwazi wayo obanzi wezandiso. I-Epiphany ayihambisani nabo, kepha okungenani inezimbalwa lokho kungaba usizo kakhulu. Siwafaka nge:
I-sudo yum ifaka i-epiphany-extensions
Ngemuva kwalokho singazilungiselela kusuka kumenyu Amathuluzi> Izandiso ngu-Epiphany. Lezo ezibonakala zisebenza kakhulu kimi yilezi:
Ithebhu yokulayisha ngokuzenzakalela
Ngokuqondile, Izenzo zilusizo kakhulu. Thumela i-URL yento oyikhetha njenge-STDIN kuhlelo noma iskripthi ositshela yona. Isibonelo, ukulanda okuqukethwe nomphathi wokulanda Gwget. Izinyathelo okufanele zilandelwe:
Qiniseka ukuthi ufake iGwget.
I-sudo yum ukufaka i-gwget
E-Epiphany, Hlela> Izenzo> Faka.
Ewindini, faka igama nencazelo echaza isenzo kahle, bese umyalo ubhale nje gwget.
Maka izinketho ongazisebenzisa ezithombeni nasemakhasini.
Manje chofoza kwesokudla kunoma yisiphi isixhumanisi, ikhasi, noma isithombe. Uzoba nenketho yokulanda noGwget, futhi kuzoba njalo.
Kukhona ukunwetshwa okusemthethweni ezindaweni zokugcina ezibizwa ngokuthi gwget-epiphany-extension, kepha abakakwenzi kuhambisane ne-Epiphany version 3 okwamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungayilungisa kanjani i-Epiphany kuFedora: i-GSettings, i-Flash nezandiso
Nginenkinga lapho amakhasi angasebenzi isitayela sefonti abukeka emabi kakhulu ngaphandle kokulwa nokulwa futhi amancane kakhulu.
Ngizamile ukusetha ifonti ezenzakalelayo kusuka ku-gnome naku-gsettings kepha ihlala injalo: /
U-Ernesto Acosta kusho
Kuhle kakhulu. Ekuhlolweni kweDebian ngohlobo 3.0.x Ummeleli Wesistimu akangibambi. Ingabe likhona iqhinga ngalokho?
Phendula u-Ernesto Acosta
Okufanayo akufani nenqubo kaDebian wakho othandekayo haha
Sawubona, nginenkinga ngalesi siphequluli. Ngine-Fedora 18… Kepha i-youtube ayisebenzi .. futhi ngazama konke .. futhi ngine-adobe flash player efakiwe futhi iyangisebenzela ku-chrome ne-firefox, ngaphandle kwalesi, ngicela ungisize ..
Sibuyele ku-inthanethi futhi
Nge-terminal: Fihla ifayela ngaphakathi kwelinye